Mety ho bevoka ve raha toa ka efa “17ème jour” aorian’ny “règle” no manao firaisana ara-nofo ?
Bevohoka mialohan’ny fanambadiana : Tena anjaranao ve ilay olon-tianao ?
Toe-javatra mateti-pitranga amin’izao fotoana izao ny hoe : bevohoka mialohan’ny fanambadiana.
Raha toa ka 28 andro no isan’ny andro ao anatin’ny tsingerim-bolanao dia eo amin’ny faha-14 andro izany no andro mahalonaka anao.
Saingy tsy amin’io andro io ihany, fa amin’ireo andro vitsivitsy mialoha sy aorian’io andro mahalonaka io, izany hoe : manomboka eo amin’ny “10ème jour” hatramin’ny “17ème jour”, dia mety ho bevohoka ianao. Miankina amin’ny toe-batan’ny vehivavy tsirairay anefa ny mahalava na mahafohy ireo fotoana mety hahabevohoka ireo. Tadidio foana koa fa mety hanova, hahalava na hahafoy ireo, ny fiasan-tsaina, ny harerahana, ny aretina, ny fihinanana fanafody…
Inona no mety hitranga raha toa ka manao firaisana ara-nofo mandritra ny fadimbolana ?
Amin’ny ankapobeny, toy ny manao firaisana ara-nofo amin’ny fotoana tsy ahatongavan’ny fadimbolana ihany, saingy mila fitandremana fotsiny mba tsy ho tasy ny fandriana. Raha toa ka samy salama tsara ianareo roa dia tsy ahiana ny mety hifindran’ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo. Io mantsy no atahorana indrindra, satria mora mampifindra ny otrikaretina ny ra. Tsy atahorana loatra koa ny vohoka tsy iriana, raha tsy hoe : niara-nitontona angaha ny fotoana ahatongavan’ny fadimbolana sy ny fotoana mahalonaka, izay tsy tokony hitranga, raha toa ka isaky ny 28 andro, na mihoatra, no miverina ny fadimbolanao.
Vehivavy 45 taona aho, efa herintaona izao no tsy tonga fotoana intsony fa efa “ménopause”. Efa herintaona koa izao no tratran’ilay hafanana be mitosaka tampoka iny, ka tera-tsemboka be sady indraindray aza fanina mihitsy. Tsy te hihinana fanafody nefa aho, ka sao mba manana torohevitra ianareo ampitoniana io “bouffée de chaleur” io ?
Amin’ny ankapobeny, amin’ilay fotoana mialohan’ny tena hitsaharam-pitsaihana tanteraka iny, na ny “pré-ménopause”, no tena mitranga ny “bouffée de chaleur”. Mety hitohy sy hitarika anefa izany, na dia efa mitsaha-pitsaihana mandritra ny fotoana ela aza. Ny tena tsara indrindra aloha dia ny miresaka mahakasika izany amin’ny dokotera “gynécologue”, sao misy tokony hodinihina akaiky ny momba ny tsiry mpanentana. Vanim-potoana iray lehibe tena mampitsimbadika ny tsiry mpanentana mantsy ny fitsaharam-pitsaihana. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny sakafo mety manampy mampitony an’ilay hafanana miakatra be tampoka. Isan’ny tena mandaitra ny tamotamo, izay azo ampiarahina amin’ny sakafo rehetra karakaraina. Tahaka izany koa ny kanelina. Tsy misy fomba hampiasana azy manokana, fa azo afangaro amin’ny sakafo, atao dite… araka izay hitiavana azy. Tena tsara ihany koa ny mihinana soja, izay ahitana ny antsoina hoe : « phyto-œstrogène ». Azo atao ronono, hanina amin’izao ny vovony, ary afaka mihinana ireny tofu, na fraomazy soja ireny koa.